Xazulula kunzima puzzle ama-crossword kuphela labo bantu are kasibili aluhambisani ne logic. Ezinye izindaba zika-usuku kunconywa ukuxazulula okungenani eyodwa crossword puzzle, scan noma ezinye puzzle ngaphezulu, ngoba ukufuna izimpendulo zezinkinga zempilo kusiza ukuthuthukisa ukucabanga.
Kumele siqale nge yokuthi uhlobo nokwengqondo okunengqondo ngamunye kudingeka ukuxazulula indlela abathile kuphela. Indlela ukuxazulula puzzle, uyazi ngisho ibanga lokuqala, njengoba lutho ngaphandle kwalokho amandla eziyinkimbinkimbi alikho kubo. Gcwalisa crossword - umsebenzi kunzima kakhulu, kubalulekile lapha okungenani nolwazi olukha phezulu emikhakheni ehlukahlukene yesayensi nokuphila. Indoda engu-15 ubudala namuhla, akunakwenzeka ukuba baxazulule iphazili yemagama laphambanako, izimpendulo zemibuzo okuyizinto imiqondo izikhathi zase-USSR, engesiyo abalandeli omdala fun okunengqondo.
Futhi lokho kakhudlwana futhi crossword puzzle ukuxazulula, kudingeka abe erudition kahle esikhulu. Kodwa le nkulumo iyiqiniso, yebo, kuphela skanvordov bendabuko lapho kudingeka ukungena amazwi aba amangqamuzana. Ungase umangale, kodwa kukhona puzzle ama-crossword, izimpendulo okuyizinto izithombe. Japanese puzzle ama-crossword - nje isibonelo esinjalo.
Khohlwa kanjani ukuxazulula puzzle, njengoba i-puzzle Japanese kufanele nzima akuyona erudition kangaka njengoba ikhono zezibalo, ngoba ngicabanga ukuthi kudingeka ukuthi kakhulu. Japanese puzzle ama-crossword bheka esingavamile ngempela: inkambu lamaseli namakholomu angazwakali izibalo at emaphethelweni. Akumangazi ukuthi lezi zifiki izoqala ulahleke futhi esabe ukuxazulula lezi puzzle. Futhi ukuxazulula abavamile crossword Japanese silula. Izinombolo Amabha ukhombise afanayo amaseli ligcwala kube wahlela umugqa ezithile. Ubunzima itholakala lokuthi ofuna ukubala kusengaphambili ukuthi kungenzeka ukweqa ezinye afanayo amaseli ukubopha nabanye, kanye ukushiya isikhala izikhala, ngaphandle lapho Japanese puzzle ama-crossword ukuba babe umdlalo "Battleship".
Uma sikhuluma Japan, akusiyo engadingekile kokukhumbula Sudoku. Kanjani ukuxazulula puzzle yalolu hlobo, mina manje ukuchaza, kodwa kuqala kumele ukukhuluma kancane ngomlando nangendlela ezibukeka ngayo. Abantu abaningi bacabanga ukuthi lapho kwazalelwa lokhu puzzle kunezwe lapho ilanga liphuma. Lokhu ukugomela eqinisweni edukisayo ngoba yasungulwa Sudoku sezibalo esidumile Leonhard Euler, owayengeyena Japanese. Umdlalo sisonke kuqala ngokuthi i kunalokho ongaziwa igama "chislobus" futhi engenacala athandwa kakhulu imvelo lezazi. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye Ukungena ku Japan chislobusy babe ezithakazelisayo embuthanweni ububanzi, futhi lethiwa samanje.
Indlela ukuxazulula puzzle "sudoku", uma kwenzeka Akakwenzanga? Ngiqinisile ngithi kini: ngeke nobunzima, ikakhulukazi uma siqale iphazili yinkimbinkimbi ongaphakeme. Ingqikithi yalo mdlalo ukuthi banikwa indawo square lamaseli-9 by 9 okwengeziwe ihlukaniswe izigcawu 3 ngu 3. sikwele ngasinye esincane kumele siqukathe izinombolo 1 kuya 9, kanye ulayini isikwele enkulu. Izinombolo imigqa tikwele letincane akufanele eziphindaphindiwe. Lokho Sudoku kuzokusiza ngenkathi away eside kusihlwa ebusika.
Yiqiniso, lena akuyona zonke puzzle, esevele kusungulwe indoda. Kube Kakuro, klyuchvordy, Ball cube ... Kodwa ngaphambi kokuba ukhethe kubo, kumelwe siqale sifunde indlela ngokushesha ukuxazulula crossword puzzle, puzzle ama-crossword kanye Sudoku, okuzoba isinyathelo sakho sokuqala ekuthuthukiseni ukuhlakanipha kwabo siqu.
Yiziphi izinhlobo ezahlukene izinsiza umshwalense. Wazi kanjani?
Iseli isitshalo - uhlelo aphansi begazi izitshalo